Ehlobo, iifoto zikaLarisa Guzeeva zafika kwiNethiwekhi, apho inkwenkwezi ayizange iphume kakuhle kakhulu. Ngokuchanekileyo, akuzange kuphumelele - ubunzima obunzima, obubekwe ngumdlali wesicatshulwa ngokukhawuleza emva kweempahla ezikhethileyo ezikulo mhlaba owenziwe ngamapapuzzi, ahlaba iso.
Intsebenziswano yazaliswa ngokukhawuleza ngamagqabaza, apho abasebenzisi be-Intanethi bagxeke khona inkwenkwezi yeenkwenkwezi ezibethelelekileyo zoBuhlukumezi.
Abasebenzisi abaninzi bavakalisa uluvo lokuba umdlali we-actress oneminyaka engama-58, kunye nobuchule bakhe bezemali, angabonakala ekwakhiwe ngaphezulu. ULarisa Guzeeva wamangalelwa ngokungamlandeli nhlobo. Kwakhona ngezikhathi ezithile kwi-Instagram, abadlali bezogxeka inkqubo "Masitshatile", elaliyi-Larisa Guzeeva iholele iminyaka engaphezu kwe-10.
ULarisa Guzeeva waphendula ngokungaqhelekanga ukugxeka kwidilesi yakhe
Ukugxeka kwi-Star Instagrams akunakwenzeka ukumangalisa nabani na. Ngamanye amaxesha abantu abadumileyo bazama ukusabela kwiingxelo zabalandeli babo. Omnye ulungile, umntu ukhubekile kwaye unqamle izimvo, umntu udala uluhlu lwamnyama lwabasebenzisi. ULarissa Guzeeva wagqiba ekubeni asebenzise indlela engaqhelekanga yokujongana nabanqwenela. Ngobusuku bokugqibela ngo-Instagram Larisa Guzeeva kukho isibheno kulabo abangenakuzikhanyela ukuvuya ngokugxeka ukubukeka komdlali. UGuzeeva wathembisa ukuba asebenzise ubuchule bakhe obuqhelekileyo:
Ngoko ke ... ukungaqhathanisi ukungathandabuzi, ndiyazi ukuba ndimdala kangakanani, ndingakanani na ukulinganisa kwaye apho ndisebenza khona, ukuba kuphinda kuphinde kube neengqungquthela ezingcolileyo kwiphepha lam-ndiya kuqalekisa. Yaye amehlo am, njengoko ummelwane wam wathi, Ndine-PURE. Kwaye zonke izihlobo zam ezimnandi, njengokuba ndihlala ndihleka!
Nangona kungaziwa ukuba uLarissa Guzeeva wayenethuba lokusebenzisa izilingo, kodwa ababhalisile be-microblogging bakhe basekela ngokuzithandayo abo bazithandayo. Ngaphaya kwesigamu somhla, isithuba somdlali we-post ufumene ngaphezu kwe-4.5,000 "ukuthandwa" (ngokuqhelekileyo ngexesha elinjalo, inani labo lingadluli ikhulu). Ngaba usebenzise imilingo ukujongana nabenzi babo? Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
U-Roman Abramovich uqhawula umtshato kuDarya Zhukova
Umbonisi omtsha weprogram ethi "Revizorro" u-Olga Romanovskaya uzame ukuphula umtshato
Zonke iindidi zokupasa
Ukuhlanjululwa kwesibindi kunye nesilwane esinamafutha kunye nezilwanyana zomntu